Kandidà A. Naina – Boriborintany fahadimy: «Tonga ny fotoana, aoka izay ny kolikoly, avereno ny tanin’ny CUA» | NewsMada
Kandidà A. Naina – Boriborintany fahadimy: «Tonga ny fotoana, aoka izay ny kolikoly, avereno ny tanin’ny CUA»
Andro fahatelo ho an’ny fampielezan-kevitra, omaly ho an’ny kandidàn’ny IRK, Andriantsitohaina Naina. Anisan’ireo fokontany notsidihiny sy nitafany mivantana tamin’ny vahoaka ny tetsy Andraisoro, Ampandrianomby ary Tsarahonenana. Hentitra ny kandidà laharana fahefatra tamin’ny lahateniny. “Tonga ny fotoana, aoka izay ny kolikoly, avereno ny tanin’ny kaominina”, hoy izy. Nanteriny tamin’izany fa tonga izy hitondra hazavana, filaminana, fahadiovana ho an’Antananarivo, ary hahazo tombony amin’izany ny boriborintany fahadimy. “Vonona ny hitantana sy hitondra isika…Homena sakafo an-tsekoly ireo mpianatra, homena asa ny mponina. Tanàna iombonana Antananarivo”, hoy ihany izy.
Olon’ny fampiraisaina sy ny fihavanana
Notsiahivin’ireo kandidà mpanolotsaina, laharana faharoa kosa ny tantara ka nilazany fa anisan’ny toerana voalohany nanaovan’ny filoha Rajoelina fampielezan-kevitra teny Andraisoro fony izy nirotsaka ben’ny Tanàna. “Nandresy izy teto ka mbola handresy koa isika amin’ity indray mandeha ity”, hoy izy ireo.
Etsy an-daniny, nampahafantatra ny mampiavaka ny kandidà Andriantsitohaina Naina ny depiote Raholdina Naivo. “Olon’ny fampiraisana sy ny fihavanana izy. Nampitambatra anay mpifanandrina tamin’ny fifidianana depiote tety amintsika izy noho ny tombontsoan’ny tanàna. Haverintsika ny soatoavin’ny fiarahamonina”, hoy izy.
Efa nandresy ary mbola handresy
Nambarany fa hitan’ny kandidàn’ny IRK avokoa ny olana sy ny fahasahiranan’ny mponina ka hovahany, hampandrosoan ny tanàna. “Nandresy isika teto tamin’ny fifidianan depiote ka mbola handresy isika amin’ity fifidianana ben’ny Tanàna ity”, hoy izy.
Tsiahivina fa nisy ny fizahana maimaim-poana sy nanomezana fanafody ireo tsy salama teny Andraisoro tamin’izao fihaonan’ny kandidà Andriantsitohaina tamin’ny vahoaka izao.